Wiil uu dhalay madaxweynihii la dilay ee dalka Chad oo talada dalka la wareegay – Calanka.com
Wiil uu dhalay madaxweynihii la dilay ee dalka Chad oo talada dalka la wareegay
Wiil uu dhalay madaxweynihii la dilay ee dalka Chad ayaa lagu wadaa in loo caleemo-saaro madaxweynaha cusub ee dalkaasi kadib markii aabihii shalay uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray dagaal safka hore ah oo uu kula jiray jabhad dalkaasi ka dillaacday oo dowladdiisa la dirireysay.
Wiilkan oo lagu magacaabo General Mahamat Idriss Deby, oo 37-jir ah ayaa dhashay sannadkii 1983-dii, Janaraal Maxamed Idiris Déby Itno waa mid ka mid ah wiilasha madaxweynihii geeriyooday. Waxaa lagu naanaysaa Maxamed Kaka, sabtoo ah waxaa soo korisay ayaydii. Kaka luuqadda Chad waxaa loo yaqaanaa ayeeyo.
Markii uu aabihii geeriyoonayay, waxa uu ahaa madaxa ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha.
Sannadkii 2009-kii Maxamed Idiris deby waxa uu ka qeyb qaatay dagaalkii Am Dam ee ka dhanka ahaa ina adeerkii Timan Erdimi.
Si kastaba ha noqotee, Maxamed ma uusan ahayn nin caan ah intii uu aabihiis madaxweynaha ahaa. Laakiin, wuxuu waqtigiisa ku bixiyay ammaanka madaxweynaha, sidoo kale wuxuuna udub dhexaad u ahaa saanadda milateriga.
In kasta oo sida muuqata uusan lahayn khibrad dawladeed, Mahamat Deby Itno wuxuu dalka Chad hogaamin doonaa muddo 18 bilood oo ku meel gaar ah.
Madaxweynaha la dilay, Idriss Déby, ayaa si lama filaan ah ku geeriyooday kaddib markii uu dagaal dhacay isagoo ku sugan jiidda hore ee dagaalka ay ciidamada waddankiisa kula jiraan xoogagga fallaagada, sida ay taliska militariga ka shaaciyeen telefishinka dowladda.